प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - आइरिस ब्यूटी कं, लिमिटेड
२.Q: म कसरी आफ्नो गुणवत्ता जाँच गर्न को लागी एक नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
एक: पहिले, हामीलाई आइटमको बारेमा तपाइँको आवश्यकता थाहा दिनुहोस्, त्यसपछि हामी तदनुसार सुझाव दिन र उद्धरण दिनेछौं। एकचोटि सबै विवरणहरू पुष्टि भएपछि नमूनाहरू पठाउन सक्दछ। यदि अर्डर राखिएको छ भने नमूना लागत फिर्ता हुनेछ।
Q. प्रश्न: के तपाईं OEM ODM स्वीकार्नुहुन्छ र तपाईं हाम्रो लागि डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ?
Q. प्रश्न: नमूना प्राप्त गर्न म कति समय लाग्न सक्दछु?
Q. प्रश्न: ठूलो उत्पादनको लागि नेतृत्व समयको बारेमा के छ?
A: इमानदारीले, यो अर्डर मात्रा र तपाइँले अर्डर गर्ने सिजनमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया यो २ 25 - days० दिनहरू हुन्छ। हामी कारखाना हौं र हामीसँग बलियो उत्पादन प्रवाह छ, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले आफ्नो देशमा उत्पादनहरू लिन चाहानु भएको मिति भन्दा दुई महिना अघि तपाईले अनुसन्धान सुरु गर्नुहोस्।
Q. प्रश्न: तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
Q. प्रश्न: हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्ने?
हामी यहाँ तपाईलाई मद्दत गर्नका लागि छौं - कृपया irisbecosmetics@gmail.com मा हामीलाई ईमेल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।